အက ( Dance ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အက ( Dance )
Posted by si tone on Aug 23, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., How To.., Ideas & Plans, Photography | 38 comments
Si Tone ပြောတဲ့ အက အကြောင်း အားပေးပါနော်...
Si Tone အထင် အက က လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်လိုထင်တယ်….. Si Tone က
အက ၀ါသနာ ပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ… Si Toneက အကနဲ့ ပက်သက်ရင် အကုန်ဝါသနာပါ ပါတယ်…
အော်…….. မေ့နေလို့…… အက မှာ အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်……. အဲဒါတွေက…
( ရုိးရာအက ၊ ဘဲလေးအက ၊ b-boy အက ၊ b-girl အက ၊ sexy အက ၊ street အက ၊ rapper အက ၊ k-pop အက ၊ Cha cha အက ၊ Robot အက ) စသဖြင့်ပေါ့နော်…… အများကြီးရှိပါတယ်….
ဒါက b-boy အကပါ
ဒါက b-girl အကပါ
ဒါ cha cha အက ပါ
ဒါကတော့ sexy အကပါ….
ဒါက streetdance ပါ
Si Toneက ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သေသေချာချာ က တက်တာ ကk-pop နဲ့ sexy ပါ…… အက ကလူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အစိတ်အပိုင် တခုလို့လဲပြောလို ရ ပါတယ်…… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကို က ခိုင်းကြည့်ပါ… အဲဒီလူ ပျင်းရိနေတာ လန်းစမ်းသွားမယ်… လေးလံနေတာ….ပျော့ပျောင်းသွားလိမ့်မယ်……. Si Tone ဆရာက ပြောတယ်.. အက က ချင်းက လဲ လေးကျင့်ခန်း တမျိုးပဲလိုပြောတယ်…….. အဲဒါကိုတော့ Si Tone ယုံတယ်… Si Toneက အမြဲ က နေတော့ ဘယ် သွားသွား ဘယ်လာလာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပဲ……
ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေလဲ အက ကိုဝါသနာပါစေချင်တယ်……………..အင်း… တကယ်လို့ အက
က မယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ကနေ အကြီးကြီးထိ ရေကြီးပါတယ်… သူ့ ပုံစံ နဲ့သူ့ အသွားအလာ အတိုင်း က သွားမယ်ဆိုရင် အက က တာမှန်ကန်သွားပီး ပုံစံလဲကျ သွားမှာပါ…………..
အင်း………………… အက မှာ အရေးကြီးဆုံးက “ ခြေတောက် ၊ လက်၊ ခါး ….” တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
အင်း သူငယ်ချင်းတို့ တကယ်လို့ကမယ်ဆိုရင်… အရင်ဦးဆုံး အကြောလျှော့ဖို လိုမယ်နော်…..
အကြောတာ မလျှော့လိုက်လို့ကတော့ …. အက က ပြီးသွားရင် ခြေလက် ကိုက်ခဲနေမှာပါ….
တစ်ခါမှ မက တဲ့သူတွေ… တကယ်လို့ က မယ်ဆိုရင် အကြောလျှော့ကိုလျှော့ရမှာပါ….. တကယ်လို့ အက ကိုဝါသနာပါလို့ ကမယ်ဆိုရင်…… ကမယ့်လူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထားပါ အဲဒါမှ အက ကိုသေသေချာချာ ရပြီး အက ကိုဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ကနိုင်မှာပါ……. Si Tone အထင် လူတွေအများစုက အကကို ၀ါသနာ ပါမယ်လို့ထင်တယ်…. ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေလဲ အက ၀ါသနာပါမယ်လို့ ထင်တယ်။တကယ်ဆို စဉ်စားကြည့်လေ…. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူအများစုမှာ ၇၀%က အက ကိုဝါသနာပါကြတယ်….
ဥပမာ- Korea နိုင်ငံ ဆိုရင် နိုင်ငံသား တော်တော်များများ အက နဲ့ အဆို ကိုဝါသနာပါကြတယ်……
Super Junior(၁၃ ယောက်)၊ Girls’ Generation(၉ ယောက်) 2ne1
သူတို့ဆိုရင် ကမ္ဘာတ၀န်း အောင်မြင်တာ… ပိရိသတ် တွေကလည်း သူတို့ကို အရမ်း
အားပေးကြတယ်.. အဲဒါ သူတို့ရဲ့ သီချင်းတွေမှာ performe အဖြစ် အကတွေ ကလို့
တခါတလေ ကျရင် Si Tone လဲ အဲဒီ korea နိုင်ငံကို ပုပ်ကျမိတယ်….. သူတို့နိုင်ငံက
လူတော်တော်များများ အနုပညာသမားတွေကြီးပဲ… သာမန်လူ နည်တယ်ဆိုပီး ကဲ့ရဲ့တာ
နောက်မှ Si Toneလဲ နားလဲ သဘောပေါက်သွားတာ……….
ဒါနဲ့ Si Tone ပြောနေတဲ့ အက ကိစ္စတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်တောင် မသိဘူး korea ၀င်ရှုပ်တာနဲ့…အဲလိုပဲ korea တွေတောင် အကတွေ ၀ါသနာပါ လို့ ပေါ့ပါးသွက်လက် ကျန်းမာပီး လှပနေကြတာ……Korea နိုင်ငံ တစ်ခုထဲ အောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်…… တခြားနိုင်ငံတွေလဲ အကနဲ့လဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတာလဲ ရှိတယ်…………… အမေရိကန် နိုင်ငံမှာလဲ အကတွေ ဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲ ဆိုတော့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံက အက သမားတွေတောင် အတုယူနေကြတာ……….အမေရိကန် နိုင်ငံမှာဆို အောင်မြင်လွန်းလို့ ရှပ်ရုင်တွေရိုက်….. ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်……… အဲလိုတွေကြောင့်သူတို့တွေ အောင်မြင်နေတာ…… သူတို့နိုင်ငံက အဆိုတော်တွေဆို ၂၀၀၉ခုနှစ်ကစပြီး သူတို့သီချင်းတွေ
ဆိုရင်… အနောက်မှာ အကတွေနဲ့ ထည့်က လာကြပီ…… အဲဒါကြောင့်လဲ ကမ္ဘာကို လွမ်းမိုးလာတာပေါ့..ဒီမြန်မာနိုင်ငံက international အကတွေနဲ့ ကမ္ဘာကို မလွမ်းမိုးသေးပါဘူး….. ဒါပေမဲ့ ပုဂံအက ရိုးရာအက
တွေနဲ့ ကမ္ဘာကို လွမ်းမိုးလာတယ်… အဲဒါတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်…..
ကယ်…… Si Toneလဲ အက နဲ့ ပက်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိသလောက် မှတ်သလောက်ပြောပြပီးပြီနော်…. ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ အက ၀ါသနာပါစေချင်တယ်………အခုခေတ် မှာ
အက ကို မက တက်ရင်.. ဒိတ်အောက်သွားပီနော်….. အက ကို ဘာလို ကတက်တက် ကတက်ဖို့ရေကြီးတယ်နော်………………………….
Si Tone အကနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျေးဇူပြုပီး အားပေးကြပါနော်……
အကဲတော့ မခက်ပါရစေနဲ့ စီတုန်ရေ..
ခက်တာက အကဆိုရင် ဦးရွှေရိုးအကလောက်ပဲသိတဲ့ တောသားမို့..
robot အကဆိုတာမရှိဘူးဗျ popping ဆိုတာပဲရှိပါတယ် robot ဆိုတာ popping ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ် တစ်ခြားအကတော့မသိဘူး
ဒီpoppingမှာအရေးကြီးတာကတော့ သံစဉ်ကိုခံစားပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ် စိတ်ကိုသံစဉ်ထဲမှာနှစ်ထားပြီး သံစဉ်ပေါ်မှာမျောနေဖို့အရေးကြီးတယ်(ထင်တာပဲ) ကျွန်တော့်အမြင်ပေါ့နော်
သူများတွေ ကတာကို ကြည့်ရတာ
တော်တော်တော့ ကောင်းတယ် ..
ဒါပေမယ့် အဲ့လို အကတွေထက်
မြန်မာ အကတွေကို ပိုပြီးကြိုက်တယ် ..
မြန်မာအက က နူးညံ့တယ်၊ သိမ်မွေ့တယ်
နှလုံးသားထဲကို ငြိမ့်ငြိမ့်လေး စီးဝင်သွားစေတယ် ..
ဟိုအကတွေကို မကောင်းဘူးလို့ မပြောဘူးနော် ..
“ကိုယ်ထင် ကုတင် ရွှေနန်း” ဆိုသလိုပေါ့ ….
စီတုန်းရေ စက်စီ အကပုံကို မမြင်ရဘူး၊ တိုင်ပတ်အကကိုဘာခေါ်လဲ။
မြန်မာအကတွေ ဟာ သိုင်းကွက်တွေကိုလျှို့ဝှက် ထည့်မြှုပ်ထားတာလို့ကြားဖူးတယ်။
ရေးတေးတေးပါ။ အချက်အလက် အထောက်အထားတော့ မပြနိုင်ပါဘူး။
တရုတ် အကနဲ့ မြန်မာ အကကို မှားနေပါဦးမယ်ဗျ ..
မြန်မာ အကတွေမှာ သိုင်းကွက်တွေ နစ်မြှုပ်ထားတယ်လို့ ကြားဖူးပါဘူး ..
ဒါပေသိ ရှိစေဦး …
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လောက် ဖန်တီးဦးမှ .. ခိခိ ..
မြန်မာ အကတွေမှာ သိုင်းကွက်တွေ နှစ်မြှုပ်ထားတယ်လို့.. ဆရာမင်းသိ င်္ခက. .၀တ္ထုတပုဒ်အနေနဲ့ရေးဖူးတယ်…
ကမ္ဘာမှာ.. အက၀ါသနာပါသူအများဆုံးတိုင်းပြည်တွေက.. တောင်အမေရိကတိုက်က တိုင်းပြည်တွေထင်တာပဲ..
မယုံရင်.. ပင်လယ်ပျော်.. သင်္ဘောသားတွေမေးကြည့်..
ဟုတ်ပါ့ သဂျီးရေ…“ပြောထုံးဖြစ်အောင် ငနက်ခေါင်” တဲ့ ဝတ္ထုကြီးပါပဲ..
ကျွန်တော်ပြောမလို့ဟာ သဂျီး ဦးသွားတယ်..
တို့ ကတော့ ချိုမိုင်မိုင် ပဲ ကတတ်တာကလား
အမှတ်တရအနေနဲ့ လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ ကပြကြတာ..
လူအများ စုပေါင်းကနိုင်အောင် အင်တာနက်ကနေဖြန့်ပေးနေလို့
ကိုရီးယာက wonder girl အဖွဲ့ဆိုလူကြိုက်အတော်များနေတာတွေ့နေရတယ်….
အော်..ဒါနဲ့စကားအတင်းစပ် အကကောင်းတဲ့ စီတုန်အကတော့အားပေးချင်သားဗျာ…..
သြော်…sexy girl လေးပဲ…
ဆိုခြင်း နဲ့ ကခုန်ခြင်း ဟာ စိတ်ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ စိတ်လွတ်လပ်မှု နယ်ထဲကို ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်လိုက်တာလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် ။ တချို့ မဆိုခင် မကခင်က ရှက်သလိုလိုနဲ့ ဆိုမိ ကမိသွားရင် ရှက်စိတ်ပျောက်သွားပြီး ပျော်ရွှင်လာတာမျိုး မုဒ်ဝင်သွားတာမျိုး တွေ.ရတယ် ။ အဆို အက အရေး အတီး အကုန်လုံး အားပေးပါတယ် ။
I like lap-dance most. No doubt I’ll pay for it.
si tone ရေ ၊
အဘ ရန်ကုန် ပြန်လာရင် အက သင်ပေးပါလားဟင် ။
ပြည်ထဲရေးက ကြားသွားလို့ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ပိတ်ခံရတော့မယ်။
မန်းဂေဇက် မန်ဘာများ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ စာပေဆုပေးပွဲမှာ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်ပါ ထည့်သွင်းလို့ရပြီ။ [:))]
Si tone ကတာပဲကြည့်ချင်တာ။
ကတော့ ကချင်ပါရဲ့… မြန်မာအကတောင် လက်ချိုးတာ အချိုးမကျဘူး။ ကျန်တဲ့အကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ တချို့တွေ အာလာဒင်တို့ဘာတို့ဆိုင်တွေမှာ ကနေတာလည်းမြင်ဖူးပါတယ်။ ခုန်နေတာ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးတောင် တွေးမိတယ်။
si tone ရေ၀ါသနာတူတာတော့ လာတွေ့နေပြီး။ Rose လဲဝါသနာပါတယ်။ ဟိုနေ့က တောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အက အကြောင်းနဲနဲေုပာဖြစ်သေးတယ်။ Rose က တော့ street dance ကို အကြိုက်ဆုံးပေါ့။ K-pop လဲကြိုက်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ Patrick Swayze ရဲ့ Dirty dance ဆိုတဲ့ ကားအရမ်းကို ကြိုက်ခဲ့တာ။ အားကျလို့ သူတို့လို ကချင်ခဲ့တာလေ။ state ကျောင်း တုန်းကတာ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်ရင်တောင်။ 10မိနစ်လောက်တော့သီချင်းလေးနဲ့ ကသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ပေါင် 15၀ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို weight ကျချင်လို့ နေ့တိုင်း မိနစ် 30 ကတာ တစ်လအတွင်း5ပေါင်ကျသွားတယ်လို့။ ဒါတောင် သူက အစားမလျှော့ချင်တဲ့သူ။ ၀ိတ်ကျတာ နှေးတဲ့သူလို့။ ပုံမှန်လေး လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ တကယ်လုပ်နိုင်ရင်တကယ် လှလဲလှလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ အခုခေတ်မှာ က သင်တန်းတွေ လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ကြိုက်တာကိုလဲ ရွေးချယ်လို့ ရတော့ ကချင်လို့ ၀ါသနာပါရင် ကဖို့ အခွင့်လမ်းတွေ များကြီးရှိလာပါပြီနော်။ မ က တာတော်တော် ကြာတော့ ဟိဟိ ပိုးက မသေဘူး။ အခု တောင် ပြန်ကချင်လာပြီ။
ဟိုအာကိုရီးကို ဝိတ်ကျအောင် က ခိုင်းကြပါဗျို့
ကတာ သင်ပေးတဲ့ အခွေလေး ဘာလေး မရှိဘူးလား။ တံခါးပိတ် ကျင့်ရအောင်လေ၊ အသက်ကြီးသွားပေမယ့် ဝါသနာ က ပါတုံးပဲ။ ပိုက်လုံးအက ဆို လိုက်ဖ် ကြည့်ချင်တာလေ။
Dance Collection ဆိုတဲ့ အခွေ ရှာကြည့်လေ ! ဇတ်လမ်းတွေ အကုန်လုံးက အက တွေချည်းပဲ !
Si Tone ဒီရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေ ကို တစ်နေ့ကြုံရင် က ပြပါ့မယ်…………… သင်လဲသင်ပေးပါ့မယ်…………………………..
သားကိုလဲသင်ပေးနော် … ၀ိတ်ကျချင်လို့ပါ … အဟီး
အပေါ်က အကတွေထဲ .. ဘာလို့များ … မြန်မာမှာ ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ … ကန္နားစီးအက မပါပါလိမ့် …
စကားမစပ် … ရွာထဲမှာ sexy dance အရမ်းတော်တဲ့ တစ်ယောက်ရှိတယ် .. ဘယ်သူများပါလိမ့် ..
အန်တီ အီးတုံး ဦးသွားတယ်
ဆိုက်ကားနင်းတာ ခဏရပ် အကတိုက်နေကြောင်း
ဘယ်ဘ၀က အမျိုးတော်လဲတော့ မသိ
ပူးနောင်း… ဂျိန်..ဂျိန် ကြားရင် ရင်တွေရော .. ဖင်တွေပါတုန်တယ်(တောင်ပြုန်းသွားဖူးရင် သိလိမ့်မယ်)
လူကျိတ်ကျိတ်တိုး …. စည်ကားနေတော့ .. နတ်တွေ ကျီစားသလား အောက်မေ့ရတယ် သများမှာ…..
ပုံ/ ရွှေဖျဉ်းညီနောင် သားတပည့်
ထာဝရဖျင်း ကိုယ်တော်လေးစီ ..
စီတုံးလေးနဲ့ ဦးကြောင် စက်ဆီအက ကချင်တယ်…။ အဲဒါ မကြိုက်ရင် ဦးရွှေရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးအက ဆိုလည်းဖြစ်တယ်။ စီတုံးဂလေးကို ဦးကြောင် ခြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာဂျီးသိအောင် အထင်အရှားပြခွင့် ပြုပါနော်…။
အူးကြောင်တော့ ..ထိ ပဟ …
နာသိတယ်နော် ။ ဟိ ဟိ ။
တိန်…သူက အင်ကြီးလား၊ အဆီတုံးလိုလို အသားတုံးလိုလို မလုပ်နဲ့နော်..ကြောင်ကုတ်ခံရမယ်၊ ရှင်းရှင်းပြော..
ဦးကြောင် ရယ် ၊
Face Book လေး ဘာလေး မသုံးတတ်ဘူးလား ၊ ညံ့ပါ့ ။
ကွီ ကွီ ….
အူးကြောင် အူးကြောင် …
အဘတို့..အူးကြောင်း၊ ဂီ့မ တို့.. တားလဲ မထားခဲ့နဲ့လေ..
ကိုရင်စီလည်း ဆက်စီ အက ကတတ်ပါတယ်…
စနစ်မှန်မှန်မတတ်တော့ စီတုံးလေး ဆီမှာ ကိုရင်စီ တပည့်ခံချင်ပါဒယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် တပည့်အဖြစ် ကိုရင်စီပြန်လာရင် မွေးစားပေးပါနော့်..
တခါတုန်းကတော့ ကိုရင်စီ ကလပ်မှာ street ဒန့်လိုက်တာ အဒန့်လွန်ပီး
စီတုန်းလေးနဲ့ Step up ထဲကလို စတွိဒန့်လေး တစ်ပုဒ်လောက် တွဲကချင်လိုက်ဒါ… :cool:
အင်း……………… Si Tone အားလုံးနဲ့ အတူတွဲ က ပါ့မယ်……………
Gay Dance ဆိုတာကောမရှိဘူးလား။ သိချင်လို့မေးတာပါနော်။။။။။။။။။